Mahita ny The Mountain Tea Lodge, Toerana Zen misy rano, vato ary hazo maniry voajanahary | Drafitra ONE-CU
Home / Interior design / Mahita ny The Mountain Tea Lodge, Toerana Zen misy rano, vato ary hazo maniry voajanahary | Drafitra ONE-CU
2021 / 05 / 26 FisokajianaInterior design 7139 0
Desidaily Interior Design Alliance
Rahoviana no hiverina, ho olona malaina
Ho an'ny piano, tavoahangy misy divay, rahona rahona
Ny renivohitry ny Dynastie Enina sy ny rivotra sy ny volana an'ny Qinhuai dia namela ny olona Nanjing tsy ho tantaran'ny literatiora matevina fotsiny, fa koa ny hasiana sy fialamboly amin'ny taolany ary ny fitoniana amin'ny toetrany.
Manomboka amin'ny ady amin'ny tantara, amin'ny fandriam-pahalemana sy milamina amin'ny fiainana andavanandro. Ny fahatsapan'ny olona ny fiainana, sy ny fanovana ny fomba fiainana amin'ny vanim-potoana, miaraka amin'ny fahatsapana ny maha-olombelona ny tanàna, dia lasa taolana sy ràn'i Nanjing, niara-nitombo tamin'ny tany.
Ao anatin'ny riaky ny rano dia hita taratra ao anatin'izany ny aloky ny maintson'ny Zijinshan Mountain, izay efa nirotsaka nandritra ny an'arivony taona maro. Ny hazo dia lava sy matevina toy ny rantsan-kazo, avy ao no miposaka ny tara-masoandro ary tavela ao amin'ireo banga eo anelanelan'ny vato eo amboniny. Io fitoniana, fitokana-monina ary fialamboly io dia nanjary takiana voalohany amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny lamin'ny tetikasa.
Toy ny "tombo-kase" voasokitra tsara, ny famolavolana ONE-CU dia mivelatra miadana ho an'ny olona manana hery milamina amin'ny fotoana sy fanajana ny fiaviana voajanahary sy ny olombelona ao amin'ilay tranonkala.
Miaraka amin'ny rano, vato ary hazo
Ny famolavolana ny ONE-CU dia fitomboana voajanahary misy rano, vato ary hazo. "Ao amin'ny zaridaina, malalaka sy lalina ny efitrano". Miolaka ny lalana ary manaraka ireo vatolampy. Ny jiro malefaka eo anelanelan'ny rakotra ala maitso, matevina. Teo anelanelan'ny natiora dia nihaona tamina trano dite hut teo am-pototry ny Tendrombohitra Volomparasy aho.
Miaraka amin'ny tendrombohitra sy vatolampy mifanakaiky, ary ny loko rano. Rehefa avy nandao ilay fiteny maso mahafinaritra sy mahavariana namboarin'ireo marika sy marika isika dia nitodika tany amin'ny natiora sy ny fomba fiaina milamina an'ny Nanjingers ankehitriny hitady ny lalan'ny fidirana famolavolana.
Mangina sy mangarahara ary maivana izy io. Eto dia mila mahatsapa fotsiny ny olona, ​​hahazoana hery amin'ny fotoana mangina miaraka aminy.
Ampifamadiho ny fetran'ny fahitana
Miaraka amin'ny zana-tany voajanahary amin'ny rano, vato ary hazo ao an-tokotanin'ny tokotany eo alohaloha. Ny famolavolana dia manangana fifandraisana misy ifandraisany sy mikoriana eo amin'ny atiny sy ivelany ny habaka mba hampitombo ny traikefa isan-karazany ao amin'ilay tranokala izay manome fidirana amin'ny fahatsapana dimy, ary amin'io fomba io no mamorona lojika fitantarana ao anaty habakabaka.
Ny faritra vestibule zavakanto dia vita amin'ny landy sy rongony manify mifono hazo. Ny mpamorona dia mamoaka malalaka ity faritra ity amin'ny alàlan'ny manjavozavo sy fampifangaroana ireo atiny anatiny sy ivelany, izay miteraka fahatsapana fahatongavana sy fiovan'ny fihetseham-po ho an'ny mpitsidika.
Ireo rindrina efatra manjavozavo dia mandalo mahitsy avy eo an-tampony, fa miato aloha any ambany, mamela elanelana iray hafa "miaina" ivelany.
Ny "miafina" manjavozavo sy ny "ankehitriny" misoko mangina, ny famolavolana dia "misokatra" amin'ny endrika fomba fijery samihafa, mamorona fahagagana ho hitan'ny olona sy ho tsapany. Ny endrika dia fanitarana ihany koa izay mampifandray ny ao anatiny sy ivelan'ny habaka, mamorona fifanakalozan-kevitra.
Mba hisorohana ny mankaleo ny fametrahana marindrano sy marindrano amin'ireo asa an-tokotany tahaka ny tokotany, dia manandrana faran'izay tsara izahay mba hamoronana lojika ambaratonga amin'ny "fiakarana sy fidinana" habaka amin'ny alàlan'ny fanavahana ny firafitry ny faritra miasa tsirairay ao anatin'ny toerana, ary ampiasao ity handaminana ny tsipika mavitrika sy hitarika ny fihetsiky ny olona.
Ny vestibule kanto dia mifamatotra mitsangana amin'ny latabatra fasika zavakanto. Ao amin'ny fiaramanidina marindrano, misy lalantsara mahitsy mamakivaky ny fiaramanidina iray manontolo. Eo anelanelany dia misy ny mety hisian'ny fifampiraharahana mitsivalana amin'ny tontolo ivelany.
Eo afovoan'ny faribolana efajoro mahazatra dia misy ihany koa ny lalana miolaka mankamin'ny toerana efatra. Ny olona dia mivezivezy tsy tapaka amin'ny habakabaka, mifangaro, mampifandray ary miparitaka, ka ny habaka dia manana ny fikorianany sy ny dinamika misy foibe fampiratiana.
Ho fanampin'izay, dia amboarinay avy eo ny habakabaka mangina eo amin'ny lafiny ara-psikolojika sy ny fahatsapan'ny olombelona mifototra amin'ny traikefa nandinika sy ny fanehoana fahatsapana ny fahatsapana amin'ny hatsarana sy zavakanto. Amin'ny lafiny iray amin'ny fizaran-drano, ny varavarana fitaratra iray manontolo izay azo sokafana sy mihidy dia manafoana ny fetra henjana mifehy ny rindrina sy ny varavarankely. Mifanakalo hevitra eto izahay.
Ny fanaka an-trano miloko marevaka dia mifangaro ao anaty ala lalina. Amin'ny fifindra-monina sy ny fikorianan'ny hazavana sy ny aloka, dia mampiseho ny toetrany manokana izy ireo.
Ny lalina sy ny maivana, ny matanjaka ary ny maivana dia tsy mifanipaka sy mizara roa amin'izao fotoana izao, fa amin'ny karazana fidirana an-tsehatra, mamorona firaisan-kina milamina sy milamina.
Ny fanahin'ny artifact
Hoy i Confucius: "Ny sambo-pitantanana dia tsy sambo, midika izany fa ny lehilahy iray tsy tokony ho voafandriky ny fisehoana ivelany, fa kosa tokony hanana faniriana fatratra hisaintsaina lalina momba ny" Tao "ao ambadik'izany. Fa etsy ankilany, ilay antsoina hoe Tao, ilay hetaheta lazaina fa lavitra, ny lamina midadasika, dia tsy maintsy ampitaina amin'ny alàlan'ny "artifact".
Noho izany, milaza izahay fa ny "fanahin'ny artifact" dia karazana fanahy mahaolona. Amin'ny alàlan'ny teny mangina ataon'ireo artifact dia mampita ny hatsarana mangina sy ny fanahin'ny habaka antenaina hamoronana ilay endrika.
Ireo singa atsinanana izay soloin'ny rano, vato, hazo ary dite dia lasa fanehoana habaka amin'ny alàlan'ny fanovana ireo zavakanto. Ny vato sy ny specimens nalain'ny mpamorona ny Tendrombohitra Volomparasy dia apetraka eo amin'ny zorony tsy mahatsiaro tena eo amin'ny habakabaka. Ny dian-tany taloha sy ny fotoana dia mbola tavela ao anaty triatra mifangaro.
▲ Mifandray amin'i Andriamatoa Xu Lei ilay mpamorona endrika
Nahazo be ny mpamorona ny fifanakalozana tamin'Andriamatoa Xu Lei, mpanakanto iray ao an-toerana any Nanjing, izay nandray ny kanto botaniolo fahizay. Ity farany dia namorona marika ara-kolontsaina - [Lianshan Doujian] tamin'ny fampiasana haitao botanika taloha. Manako sy mifamatotra amin'ny lohahevitry ny habaka miaraka amin'ny foto-kevitry ny famolavolana ny "fijerena ny toerana niavian'ny olombelona sy ny natiora".
▲ Trondro ao anaty ranomasina
Ny seho miharihary amin'ireo trondro vaventy mitsambikina avy ao anaty rano sy ilay sambo kely misy aloky ny lay dia nalaina avy amin'ny teny ao amin'ilay boky taloha "The Book of Vajra Sutra" ary ampiarahina amin'ireo zavamaniry tranainy nangonina nandritra ny 70 taona mba hamoronana ny fampisehoana. Ny fampirantiana dia taratry ny tantaran'izao tontolo izao, ny tantaran'izao tontolo izao ary ny tantaran'izao tontolo izao.
▲ Ny "Ruiji Bird of Prey" dia fanehoana ny tontolo voajanahary.
Ity sampan'ny hazo ity, izay miseho ho "vorona mpihaza", dia mitondra ny tenin'ny Vajra Sutra amin'ny vavany ary manidina mianatsinanana. Manidina mankeny amin'ny ilany atsinanan'ny Tendrombohitra Volomparasy izy io, manondro ny harena sy ny fahasoavan'i Purple Qi avy any atsinanana.
Ny vato mifanindry, ny fahalemen'ny rano, ny hafanan'ny hazo ary ny fahatsoran'ny zavatra. Ao anatin'ny habaky ny volavolan-javaboary voajanahary dia mifampiara-peo izy ireo ary mifampitsimoka, ary miaraka lasa loharanon-kery ho an'ny "fanitarana" habaka tsy manam-petra miaraka amin'ny fanomezam-boninahitra ara-panahy.
▲ sary fanaovana sary
Anaran'ny tetikasa: Nanjing Zhonghai Zhongshan Yin Marketing Center
Daty famitana: aprily 2021
Ivotoerana famolavolana: Famolavolana ONE-CU
Talen'ny famolavolana: Huang Jianfeng
Ekipa fametrahana mafy: Hou Yipeng, Ao Xueyao, He Hao, Yang Qiwen
Ekipa haingon-trano malefaka: Cai Shaona, Hua Chou, Xiang Nan, Liao Jiamin, Zhang Langliang
Fitaovana lehibe: taila fahagola, vita vita amin'ny hazo, gorodona hazo, loko vita amin'ny vatosoa, vato voalohany
Saripika eny amin'ny habakabaka: He Chuan
Famokarana horonantsary: ​​DD Xiang Shu Cheng
Mpanorina & talen'ny famoronana an'ny ONE-CU
| ONE-CU |
Ny iray, tandindon'ny fanitarana ny fotoana, dia mariky ny tsipika.
Kianja, maneho ny volan'ny trano, ny endrika habe telo-habe.
Amin'ny maha masoivoho mpamorona zava-baovao natokana ho an'ny famolavolana fikarohana sy fampandrosoana ary serivisy fanoloran-tena ho an'ny trano fivarotana marika, trano fandraisam-bahiny boutique, birao famoronana, sns. Hatramin'ny nananganana azy dia niara-niasa tamin'ny Vanke, Poly, China Resources, China Shipping ary mpamorona marika hafa efa ela izy, miaraka amin'ny fanajana ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny habakabaka miaraka amin'ny fanajana ny tetikasa. Izy ireo dia mahay mamorona ny sanda vokatra sy ny traikefa amin'ny habakabaka tokony hananan'ny tetikasa amin'ny tetikady tetik'asa, ny lojika amin'ny vokatra ary ny toetoetran'ny tranonkala. Ekipa mpamolavola ONE-CU dia manizingizina hatrany ny handrava ny sisin-tany famoronana, hahitana ny fototry ny marika sy ny tetik'asa, ka samy manana ny mari-pana sy ny sandany ny endrika rehetra.
Ny ilany havia amin'ny fidirana dia ny faritra miova kiraro, miaraka amin'ny fitaratra hatramin'ny faran'ny toerana, mahatonga ny toerana hahatsapa ho mahazo aina sy mamiratra kokoa. Mba hampitomboana ny fifandraisan'ny habaka, ny lakozia dia mampiasa ny varavaran'ny fitaratra mihetsiketsika an'i Changhong. Io dia ahafahana mifampiresaka sy mifampiresaka eo amin'ny sehatra roa samy hafa.
Previous :: Scema miloko fotsy sy fotsy madio, miverina amin'ny fahatsorana sy fahadiovan'ny trano | First Space Design Chengdu Next: Ahoana ny fiovan'ny tohatra miolikolika avy amin'ny famolavolana ka hatrany amin'ny fipetrahana?
2021 / 08 / 15 5751
2021 / 08 / 14 5822